Iindaba - Ifayibha yezityalo zaseBagasse
I-Melanoma yenza iipesenti ezi-4 kuphela kuyo yonke imihlaza yomhlaza kodwa iphakathi kwezona ndawo zinee-neoplasms ezinobungozi. I-Dacarbazine sisiyobisi esikhethiweyo kunyango lwe-melanoma eBrazil ngenkqubo yezempilo yoluntu ikakhulu ngenxa yexabiso eliphantsi. Nangona kunjalo, yiarhente ye-alkylating yokubalula esezantsi kwaye ifumana impendulo kunyango kuphela kwi-20% yamatyala. Amanye amayeza afumanekayo kunyango lwe-melanoma ayabiza, kwaye iiseli zethumba zihlala zikhula ekuchaseni la machiza. Ukulwa ne-melanoma kufuna inoveli, amachiza athile asebenzayo ekubulaleni iiseli zesisu esinganyangekiyo ngamachiza. I-Dibenzoylmethane (1,3-diphenylpropane-1,3-dione) Iziphumo ezithembisayo ziiarhente ze-antitumor. Kolu phando, siphande isiphumo se-cytotoxic se-1,3-diphenyl-2-benzyl-1,3-propanedione (DPBP) kwi-B16F10 iiseli ze-melanoma kunye nokuhlangana kwayo ngqo nemolekyuli ye-DNA isebenzisa i-optical tweezers. I-DPBP ibonise iziphumo ezithembisayo ngokuchasene neeseli zethumba kwaye inesalathiso sokukhetha sama-41.94. Kwakhona, sibonise amandla e-DPBP okunxibelelana ngqo nemolekyuli ye-DNA. Inyaniso yokuba i-DPBP inokunxibelelana ne-DNA kwi-vitro isivumela ukuba sicinge ukuba unxibelelwano olunjalo lunokwenzeka nakwi-vivo kwaye, ke, i-DPBP inokuba lolunye uhlobo lokunyanga abaguli abane-melanomas enganyangekiyo ngamachiza. Ezi ziphumo zingakhokelela kuphuhliso lwamachiza amatsha nasebenza ngakumbi.
Iplothi yepesenti yokufa kweseli efunyenwe kwi-DPBP ikhompawundi ngokuchasene nemelan-A kunye neB16F10 imigca kwiindawo ezahlukeneyo. Iimpawu ezikhethiweyo (SI = IC50 melan-A / IC50 B16F10) yayingu-41.94.
Ipapashwe ngu-Elsevier BV
IDibenzoylmethane (DBM) yindawo encinci yelayisensi kunye ne-β-diketone analogue ye curcumin. Ukondla i-1% ye-DBM kukutya kwiimpuku ze-Sencar ngexesha lokuqalisa kunye nexesha lokuqalisa emva kokuthintela kakhulu i-7,12-dimethylbenz [a] anthracene (DMBA) -kunciphise ukuphindaphindeka kwethumba kunye ne-mammary tumor izehlo nge-97%. Ukuqhubekeka kwizifundo ze-vivo zokucacisa iindlela ezinokuthi zithintele isenzo se-DBM, ukondla i-1% DBM kwisidlo se-AIN-76A ukuya kwiimpuku ze-Sencar ezingafakwanga kwiiveki ezi-4 ukuya kwezi-5 kunciphise ubunzima obumanzi besibeleko nge-43%, kuthintelwe ukukhula kwenqanaba yeeseli ze-epithelial ze-mammary gland nge-53%, i-uterine epithelium ngama-23%, kunye ne-uterine stroma ngama-77%, xa iimpuku zabulawa kwinqanaba lokuqala le-estrus yomjikelo we-estrous. Ukongeza, ukondla i-1% ye-DBM ekutyeni kwiimpuku ze-Sencar kwiiveki ezi-2 ngaphambili, ngexesha kunye ne-1 iveki emva konyango lwe-DMBA (intubation ye-1 mg DMBA ngempuku enye ngeveki kwiiveki ezi-5) kuthintelwe ukwenziwa kwe-DMBA-DNA iyonke ekwi-mammary amadlala ngama-72% esebenzisa uvavanyo lwe-post-32P-labeling. Ke, ukondla i-1% yokutya kwe-DBM kwiimpuku ze-Sencar kuthintelwe ukwenziwa kwe-DMBA-i-DNA yeziyobisi kwiincindi zamabele kwaye kwehlise izinga lokwanda kwencindi yamabele kwi vivo. Ezi ziphumo zinokuchaza isenzo esomeleleyo sokuthintela ukutya kwi-DBM kwi-mammary carcinogenesis kwiimpuku.
Ixesha Post: Aug-12-2020